Philips Garment Steamer GC514/49 ~ ICT.com.mm
HomePhilips Garment Steamer GC514/49
Philips Garment Steamer GC514/49
Brand: PHILIPSSKU: 71479N/ASee more: Benchtop Appliances, Lifestyle, New Arrivals, Philips, Products, ShopFilter by: Steamers
Philips အမှတ်တံဆိပ် Garment steamer က ခေါက်ရိုးရာမထင်လိုတဲ့ အဝတ်အစားတွေနဲ့ သမာရိုးကျ မီးပူတွေနဲ့ တိုက်လို့မရတဲ့ အဝတ်အထည်တွေကို ရေနွေးငွေ့အသုံးပြုကာ ခေါက်ရိုးရာမရှိစေဘဲ မီးပူတိုက်ထားသလို ပြန့်ပြူးလာအောင် ပြုလုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေနွေးငွေ့ထုတ်ပလိတ်ပြားက ပြီးခဲ့တဲ့ Steamer တွေထက် 25% ပိုမိုကြီးမားလာတဲ့အတွက် ရေနွေးငွေ့ပေးတဲ့ဧရိယာက ပိုမိုကျယ်ဝန်းလာမှာဖြစ်ပြီး အထည်တွေကို ပိုမိုမြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြန့်ပြူးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ချည်မျှင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် ရေနွေးငွေ့ Level သုံးမျိုးကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ 1600 W ပါဝါအားရှိပြီး အမြင့်ဆုံးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ ရေနွေးငွေ့ပမာဏကတော့ 32g/min ဖြစ်ပါတယ်။ ရေ ၁.၆ လီတာအထိ ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ ရေကန်ငယ်ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ အလိုအလျောက် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးတဲ့ Easy de-calc လုပ်ဆောင်ချက် ပါဝင်ပါတယ်။ Garment Steamer ရဲ့ အမြင့်ကို ချိန်ညှိလို့ရအောင် ပြုလုပ်ပေးထားပြီး အဝတ်အထည်အားလုံးနဲ့ စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ လုံခြုံစိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ သင့်ရဲ့လက်ကို ကာကွယ်ပေးထားမဲ့ လက်အိတ်တစ်စုံကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
This EasyTouch Plus steamer is equipped with 25% larger steam plate* compared to the predecessor models. This allows you to cover more fabric area in one stroke and therefore you can be more efficient in steaming your garment. Set your preferred steam level for optimal results on different kinds of fabric. Integrated adjustable pole for hanging your garments while using the steamer. It is collapsible for easy storage.
This item: Philips Garment Steamer GC514/49 K169,000